(၃၁)ဘုံ မှာ အလှဆုံး အပြုံး ဆိုပြီး သူမရဲ့ အပြုံး ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း – Let Pan Daily
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း 31 ဘုံမွာ အလွဆုံးအၿပဳံး??? ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မော်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်
ျမင္သူ တိုင္းေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္မ်က္ဝန္း ကို သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကကို ဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသးပင္မဲ့ ပရိသတ္အမ်ားအျပားရဲ႕ အားေပးဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္းရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါတယ္ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဝန္းရံအားေပးမႈ ရရွိထားတဲ့သူမကေတာ့ social media ေလာကမွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလည္း 31 ဘုံမြာ အလြဆုံးအၿပဳံး??? ဆိုတဲ့ Caption ေလးနဲ႔ အလန္းစားပုံေလးေတြတင္ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ ပုံေလးေတြတိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္းေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ် ႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံေလးကို တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္းရဲ႕ အလွပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္တယ္ေနာ္
ပုရိသေတြကို ရင္ခုန္ျမန္ေအာင္ ဖမ္းစားလိုက္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ အယ္လာ
အသက်ကြီးလာပြီ၊ ယောက်ျားမယူသေးဘူးလား ဆိုပြီး လာ​ဝေဖန်သူကို စကားလေးတစ်ခွန်း နဲ့ နောက်မပြောရဲအောင် ပညာပြလိုက်တဲ့ လုလုအောင် ရဲ့ Tiktokလေး